Home » How To.. » The Sense of Traveling
Posted by sorrow on Jul 28, 2016 in How To.., My Dear Diary, Travel | 25 comments
Travel Pro တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်မကင်းသလိုခံစားရတယ် ….
ကိုယ်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီး ရင်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေ အလဟသဖြစ်သွားသလိုခံစားရတယ်…
ထပ်ရေးပါဦး ဆန့်ငင် ဆန့်ငင်နဲ့
နာ က ခရီးသွားရမှာ အရမ်းပျင်းတာကော။
.food & Travel တွဲလိုက်ရင်တော့ တိုးကောင်းပါရဲ့ ..ကိုရီးယားတွေ သိပ်ကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့လိုခရီးစဉ်မျိုး….ပင်လယ်ကမ်းစပ်ကိုခေါ်သွား ..ငါးတွေဖမ်းခိုင်း..ရေဘ၀ဲတွေဖမ်းခိုင်း…ပြီးရင် တခါထဲကင်ကျွေးတာမျိုး .
.သတိရလို့ ပြန်သွားတူးတာ…ကဲကြည့်…ဘယ်လောက်တော်တဲ့ Tour Operator လေးလဲ …
ခရီးသွားတာကို ငယ်ငယ်လေးထဲက ၀ါသနာပါပါတယ် ..
..ဒါပေါ့…တချိန်မှာ နောင်တဆိုတာ … ငယ်တုန်းခရီးမသွားခဲ့ဘူးဆိုတာမျိုး ကနေ မရတော့ဘူးပေါ့ … အင်အားအပြည့်ရှိနေတုန်း…လူငယ်ဘ၀မှာ ခရီးတွေသွားနိုင်သလောက်သွားပစ်…
မတွေးရဲအောင်ပဲ …တကယ်က ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့​နေ၀င်ဆည်းဆာကို .. အချိန်ယူပြီးကြည့်ရတာမျိုး ….ချစ်သူလက်ကလေးကိုင်ပြီး ၀ိုင်ခွက်လေးနဲ့ ….
ဒီမှာတော့ အသက်ကြီး တဲ့ လူကြီး တွေချည်းဘဲ သွားနိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးတယ်။
Post နဲ့ တော့ မဆိုင်ပါဘူး။
စကားအတင်းစပ်​ pre-wedding photo ကို ပဲရစ်​​မျှော်​စင်​နဲ့ ဘိလပ်​က နာရီစင်​ကြီးနဲ့ ရိုက်​ချင်​တယ်​ တဲ့ခင်​ဗျ….အိုပါးက Travel planner မို့ ပြန်​ချစ်​ထားသတဲ့ဗျာ …​ ​​​တွန်းချတဲ့သူလိုက်​ရှာပြီး​လျော်​​​ခိုင်းမှာ…အဟီဟီ … ​တင်းတိမ်​​ရောင့်​ရဲသူသာ​အောင်​နိုင်​ရာ ..
အင်း သူ ဟန်းနီးမွန်း ထွက်ချင်နေပြီ
၄၀ ကျော်လာတဲ့ အချိန်မှာ
Travel Is an Art ပေါ့အစ်ကိုရဲ့ …တိုင်းတပါးကိုသွား …မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေလိုက်ကြည့်ပြီး…ဒေသအစားအသောက်လေးတွေစားပြီး …အလှအပ လေးတွေ..အထင်ကရနေရာလေးတွေကို လိုက်ကြည့် ဓါတ်ပုံလေးရိုက်ပြီး ခံစားတာထက် အနုပညာဆန်တာဘာရှိအုံးမှာလဲ …အင်အားရော ..အတွေ့အကြုံရော ပညာရော အထွတ်အထိပ်ဖြစ်နေတဲ့ ၄၀ ကျော်အရွယ်က ခရီးထွက်လို့အကောင်းဆုံးပေါ့ အစ်ကိုရဲ့
…အမငီး..အဲ့​လောက်​​တောင်​ပဲလား တဂျီး …ပင်​ပန်းလိုက်​မယ့်​အမျိုး ၃၂၀၀ နဲ့နာရီငါးဆယ်
မြန်မာပြည်မှာ ခေတ်စားတဲ့ ဘုရားဖူးခရီးဆိုတာကို ဘယ်လိုမှ ခံစားလို့မရ…
အမှန်ပဲ..မွန်လေးဆို freedom ပဲခရီးသွားရတာကြိုက်တယ်
ပြန်ဖတ်လိုက်တိုင်း စိတ်ချမ်းသာရတယ် ..တယ်တော်တဲ့ Travel Planner လေး …